Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၆	18
By MARK LANDLER and ERIC LICHTBLAUJULY 5, 2016
By Gabrielle Levy | Political Reporter July 5, 2016, at 6:10 p.m. “Everybody’s got an opinion, but nobody actually knows the job until you’re sitting behind the desk,” he said. “Everybody can tweet, but nobody actually knows what it takes to do the job until you’ve sat behind the desk.
မြစပဲရိုး says: ■ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လအတွက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ရွေးချယ်သည့် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူ ထူးချွန်လူငယ် “မနော်ဒါးခူ” ■ Many Many Congratulations Empowered Girl!
kai says: ပုံ..။
မြစပဲရိုး says: အသက်အရွယ် ကြီးတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အတွက် သီးသန့်ကတ်ပြားတွေ ထုတ်ပေးမယ်
kai says: လောလောဆယ်တော့.. ထိုင်းကရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား သိန်းဂဏန်းအတွက်.. ပတ်စ်ပို့စ်ထုတ်ပေးဖို့.. ဘက်ဂျက်အခက်အခဲရှိနေတာကြားနေမိရဲ့..။
တနှစ်.. ၁ဘီလီယံဒေါ်လာ ထွက်လာမယ်ဖြစ်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အရောင့်နုနုမှတ်တမ်းလေး ရေးပါဦး သဂျီး။
ဂျစ်စူ says: မ.ဘ.သ ကို ပြစ်မှားရွေ့မာမူ့ဆာဗာ နာရီပေါင်းများစွာ ဒေါင်းသွားခြင်း
kai says: Religious Affairs Minister Says No Monk is Above the Law
မြစပဲရိုး says: ■အရေးပေါ်ကာလစီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း■
kai says: အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား တပ်ချုပ် တက်ရောက် အလေးပြုမှု သင့်မြတ်ရေးလမ်းစဟုဆို
kai says: အာဇာနည်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်တွင် ဟောကြားခဲ့သည့် ဓမ္မဘေရီဆရာတော်၏ တရားတော်အား ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
kai says: REUTERS – British Foreign Secretary Boris Johnson, asked byareporter if he was going to apologize to world leaders for past rude comments he has made about some of them, said his words had been taken out of context. “We can spend an awfully long time going over lots of stuff that I’ve written over the last 30 years … all of which in my view have been taken out of context, but never mind, but some serious issues call us today,” the former journalist Johnson toldanews conference on Tuesday with U.S. Secretary of State John Kerry.
kai says: “ကျနော်တို့ ဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ ကျနော်တို့ပြည်နယ်တွေမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ တောင်တွေဟာ မြေပြန့်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ မြေပြန့်တွေဟာ ကန္တာရ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေဟာ ခမ်းခြောက်ကုန်ပြီ။ ကျနော်တို့ လူထုတွေရဲ့ကျေးရွာတွေဟာ ပျက်စီးပြီးတော့ တောထဲတောင်ထဲရောက်နေ ကြပြီ။ မြေအောက်က သံယံဇာတဆိုရင် ကုန်ပြီ ထုတ်လို့။ သစ်ပင်ဝါးပင်တွေမရှိတော့ဘူး။
kai says: Thailand’s Tourism Ministry looking to put an end to sex tourism
by Asian Correspondent Staff | 18th July 2016 | @ascorrespondent On average, Thailand receives around 10 million tourists annually, of which some 60 percent stood among males, according to World Outreach International.
kai says: မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ အချိုးအစားများ
မြစပဲရိုး says: သူကြီးမင်း နဲ့ တစ်ကွ သတင်းရေးသမားများ
kai says: The crown Prince of Thailand Maha Vajiralongkorn, who flew to Munich for Boening-737, showed up at the airport withawhite poodle in his arms, in sandals andatoo short shirt, put on displayahugetattoo in his back.
မြစပဲရိုး says: Quote from Michelle Obama’s speech – Democratic convention2016 “And as my daughters prepare to set out into the world, I wantaleader who is worthy of that truth,aleader who is worthy of my girls’ promise and all our kids’ promise. A leader who will be guided every day by the love and hope and impossibly big dreams that we all have for our children.”
kai says: http://nypost.com/2016/07/26/cockroach-milk-is-the-superfood-the-worlds-been-waiting-for/?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=NYPFacebook&utm_medium=SocialFlow&sr_share=facebook